ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ | Myanmar Blog
နောက်ထပ်ရလာတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တင်ထားပေးပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ သူများ ရှာပေးထားတာတွေပါပဲ။
Google PR တောင်မှ2ရောက်သွားတယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ကျတာဘာဆန်းလဲ ဘာမှမရေးတာကိုး။ ရေးတုန်းကလဲ PR တက်ဖို့ မရည်ရွယ်ဘူးပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း Link မချိတ်ခိုင်းဖူးပါဘူး။ အဲလိုပြောလိုက်တော့မှ စာပြန်ရေးစေချင်လို့ပါတဲ့။ ပြောမယ်ဆိုလဲ ပြောချင်စရာမရေးတာလဲ တော်တော်ကြီးကိုကြပြီကိုး။ comment တွေတောင် approve ပဲလုပ်ပြီး အကြောင်းပြန်တာတွေ ရှင်းပြတာတွေ မလုပ်တာ ၃ လကျော်ရောပေါ့။ အဲတာတောင် လာဖတ်နေတဲ့ bot တွေ အဲလေ လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ရေးချင်လို့ရေးနေတာလေးတွေကို ရေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ ဆက်ရေးနေဦးမှာပါ။ အခုလဲ မြန်မာစာအုပ်တွေရှားပါးနေပါတယ်၊ ဖတ်ချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ဂျံဂါးရောက် မြန်မာများအတွက် မြန်မာစာအုပ်သာမက Eng စာအုပ်တွေပါပါပါတယ်။ Buddha အကြောင်းနဲ့ Buddha Philosophy တွေပါ။ ဘယ်ဘလောက်ကလဲတော့မသိပါဘူး။ သူများရှာပေးထားတာပါ။ blog / web ပိုင်ရှင်ကိုသိရင်ဖြင့် နာမည်တပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနိုင်ဖို့ Blog Name လေး ပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။
ကဲလောလောဆယ်တော့ မြန်မာ e-Book များ စာရင်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ
မောင်ထင် _ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း
၀င်းသိန်းဦး _ ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ဗုဒ္ဓမဝေဖန်နှင့်..
၀င်းဦး _ မိန်းမလှ အမုန်း
သန်းမြင့်ဦး _ အချစ်ဘ၀နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ
အရှင်ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ _ ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တရားဦးဓမ္မစက်
ဦးကုလား _ ရာဇ၀င်
ဦးကံညွှန့် _ နိဗ္ဗာန်ပို့မည့်တရားတော်များ
ဦးကံညွှန့် _ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊တရား၊အနှစ်သာရနှင့် ရှုပွါးနည်း
ဦးကျော်ဇေယျ _ မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ
ဦးကျော်ဇေယျ _ ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရအဘိဓါန်
ဦးကျော်ဇေယျ _ ဥပဒေသမား လက်စွဲစကား
ဦးကျော်ဇေယျ _ အစုစပ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေ
ဦးကျော်ရန် _ မူလ=ဆေးအဘိဓါန်ကျမ်း
ဦးကျော်လှ _ သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ်
ဦးကျော်သိန်း _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်ကျင့်စဉ်
ဦးစိုးလွင် _ အစ္စလာမ့်အတိတ်သမိုင်းမှ အယူဝါဒဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ
ဦးစက္ကိန္ဒ _ ဥာတပရိညာ
ဦးစန်းမောင် _ ရခိုင်မင်းသား , သံတော်ဆင့် , ၁၉၄၆
ဦးဇနိတာလင်္ကာရ _ ပဋိစ္စသမုပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာ အမေးနှင့်အဖြေအကျဉ်းချုပ်
ဦးဌေးလှိုင် _ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
ဦးထွန်းကြည် _ ကောင်းမှုတော်ဘုရားသမိုင်း
ဦးထွန်းလှ _ ရွေးချယ်ရမည့်မိန်းမကောင်း. ရှာဖွေရမည့်ဇနီးလောင်း
ဦးနု _ တာတေစနေသား
ဦးနု _ အာဇာနည်
ဦးပုည _ မန္တေလေးဘွဲ့ မော်ကွန်း
ဦးပုည _ ရေသည်ပြဇာတ်
ဦးဖိုးကျား _ ၃၇ မင်း
ဦးဖိုးကျား _ သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ
ဦးဘကြည် _ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့
ဦးဘကြည် _ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓသာသနာဝင်
ဦးဘဘေ _ နိုင်ငံရေးရာအဖြာဖြာ ဒုတိယတွဲ
ဦးဘသန်း _ ယောနသံဇင်ရော်
ဦးဘေ _ ၀ရုဏပျို့ 
ဦးမောင်ကြီး _ ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးနတ်ဖြစ်ပြဇာတ်သစ် ပထမတွဲ
ဦးမောင်မောင်သန်း _ ၂၁ ရာစုအင်္ဂ၀ိဇ္ဖာဆောင်းပါးများ
ဦးမောင်သိန်း _ ပဋာစာရီ- ဒုတိယပိုင်း
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်မြို့  , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန်လ
ဦးရဿက _ စတုသစ္စပကာသနီကျမ်း
ဦးရေ၀တ _ သာသနာ့အမွေကိုခံယူခြင်းနှင့်ငါလုပ်ချင်တာ
ဦးရေ၀တ _ နားလည်နိုင်ခြင်း၏စွမ်းအား
ဦးရွှေအောင် _ ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့
ဦးရွှေအောင် _ ဓမ္မပဒ
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း
ဦးရွှေအောင် _ ဘ၀အကျဉ်းသား
ဦးရွှေအောင် _ ဘ၀အမြင်သစ်
ဦးရွှေအောင် _ အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတွေးအမြင်စာစုများ
ဦးလှ _ ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပတွဲ , မြန်မာ့သိပ္ပံစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၅.၁၀.၁၉၃၈
ဦးလွှား _ ဓါတ်စာကျမ်း
ဦးဝိမလ _ ကင်္ခါမေးခွန်းနှင့်အဖြေ
ဦးသက်စိန် _ ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံ
ဦးသက်ထွန်း _ အနောက်တိုင်းမှ နုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏အဆိုများ
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ
ဦးအေးမောင် _ ဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ဦးအောင်ခင် _ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ
ဦးအောင်ခင် _ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ
ဦးဣန္ဒောဘာသ _ ၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် ၁၂၉၀ ကဆုန်လ
Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creator
*Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf & , New York , 1883
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POONA ,1937
Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 195
A True Spiritual Warrior
All-Embracing Net of Views (Brahmajalasutta)
Acariya Mum Bhuridatta
Ancient Indian Education Part I&II Hinduism
Asia’s Cultural Mosaic
Basic English Grammar II
Body of Secret
Buddha and BodhisattvaaHindu View
Buddha’s Ancient Path
Buddha’s Socio-political ideas
Buddhism and Connexion
Buddhist Arts and Antiquities
Buddhist Arts of Thailand
Buddhist Tales for Young and Old I
Buddhist Tales for Yound and Old II
Buddha’s way of immortal medicine
Causality Central Philosophy of Buddhism
Dictionary of Pali Proper NamesI
Dighanikaya Atthakatha I
Dighanikaya Atthakatha II
Dighanikaya Atthakathatika I
Dighanikaya Atthakathatika II
Dighanikaya Atthakathatika III
Digital Photography All-In-One Desk
Doctrine of Upanishad and Early Buddhism
Duties of Samgha
Encyclopedia of Biology 1
Encyclopedia of Biology 2
Encyclopedia of Biology 3
Encyclopedia of Biology 4
Encyclopedia of Children’s Health 1
Encyclopedia of Children’s Health 2
Encyclopedia of Children’s Health 3
Encyclopedia of Children’s Health 4
*Encyclopedia of English Language
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 1
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 2
Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security Vol. 3
Encyclopedia of Medicine Vol. 1 (A-B)
Encyclopedia of Medicine Vol.2(C-F)
Encyclopedia of Medicine Vol. 3(G-M)
Encyclopedia of Medicine Vol.4(N-S)
Encyclopedia of Medicine Vol.5(T-Z)
Encyclopedia of Philosophy I
Encyclopedia of Philosophy II
Encyclopedia of Philosophy III
Encyclopedia of Philosophy IV
Encyclopedia of Philosophy V
Encyclopedia of Philosophy VI
Encyclopedia of Philosophy VII
Encyclopedia of Philosophy VIII
Encyclopedia of Philosophy IX
Encyclopedia of Philosophy X
Encyclopedia of Religion I
Encyclopedia of Religion II
Encyclopedia of Religion III
Encyclopedia of Religion IV
Encyclopedia of Religion V
Encyclopedia of Religion VI
Encyclopedia of Religion VII
Encyclopedia of Religion VIII
Encyclopedia of Religion IX
Encyclopedia of Religion X
Encyclopedia of Religion XI
Encyclopedia of Religion XII
Encyclopedia of Religion XIII
Encyclopedia of Religion XIV
Encyclopedia of Sociology Vol. 1
Encyclopedia of Sociology Vol. 2
Encyclopedia of Sociology Vol. 3
Encyclopedia of Sociology Vol. 4
Encyclopedia of Sociology Vol. 5
Encyclopedia of Mental Disorders I
Encyclopedia of Mental Disorders II
Encyclopedia of Public Relation 1
Encyclopedia of Public Relation 2
Encyclopedic History of World Civilization 11
Encyclopedic History of World Civilization 1
~ by Ko Ko Ye` on May 10, 2009.
12 Responses to “ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ”
[…] full post is ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ […]
မြန်မာ e-Books များ « Myanmar Blog said this on	May 10, 2009 at 3:46 pm | Reply
Thanks for all this link.
nusantaraku said this on	May 12, 2009 at 2:27 am | Reply
can’t download “Mg Thar Ya”
juno said this on	June 17, 2009 at 2:12 pm | Reply
ပညာဝုဓ said this on	June 26, 2009 at 8:14 pm | Reply
စာအုပ်တော်တော်များများ ဒေါင်းလုဒ် ယူသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲ အများကြီး တင်ပါတယ်။
ထက်ကြီး said this on	August 21, 2009 at 2:23 pm | Reply
နတ်အကြောင်းရေးတဲ့ စာအုပ်တွေတော့ ဖျောက်ဖျက်သင့်ပါတယ်။ ရလဲ မတင်ပေးပါနဲ့ 🙂
စာကောင်းပေကောင်းတွေ အများကြီး စုဆောင်းနိုင်ပါစေ။
ထက်ကြီး said this on	August 21, 2009 at 2:25 pm | Reply
နတ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိသလေက်တော့ အရှင်ထွက် အမေရေယာဉ်တစ်ပါးပဲရှိပါတယ်။ တင်တယ်ဆိုတာ ဗဟုသုတအတွက်ပါ။ ကျွန်တော် လဲ နတ်မကိုးကွယ်ပါဘူး။ နတ်အကြောင်းတင်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်စေချင်တာတစ်ခု သက်သက်ပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Ko Ko Ye` said this on	August 21, 2009 at 8:20 pm | Reply
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…စာအုပ်တော်တော်များများ မ သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် မြန်မာ စာအုပ် အသစ်တွေလဲ တင်ပေးပါ အုံး…
ဇော်မောင်ဇော် said this on	September 27, 2009 at 7:34 pm | Reply
ဇော်မောင်ဇော် said this on	October 3, 2009 at 9:35 pm | Reply
ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ the richest man in babylon စာအုပ်
ဒေါင်းလိုက်တော့ myn font မပေါ်လားဘူး
သီဟ said this on	October 5, 2009 at 5:01 pm | Reply
စာအုပ်တွေကိုဒေါင်းလုပ်ပြီးယူသွားပါတယ် စာအုပ်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မြန်မာစာအုပ်တွေကို ထပ်ယူဖို့လည်း အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
nay lin tun said this on	October 8, 2009 at 11:26 am | Reply
ဇော်မောင် said this on	October 10, 2009 at 6:46 pm | Reply